Ondana Latina tsara indrindra misy mpamatsy fonony
Mpanamboatra ondana latina voajanahary voajanahary avy any China
fandriana bonnell lohataona mora indrindra
Rayson any amin'ny faritra indostrialy Rayson, làlana Huasha, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, Sina. Vokatra lehibe ondana Latina tsara indrindra misy mpamatsy fonony
Ny fiasan'ny vokatra dia nohatsarain'ny R mahery
& ekipa D.
Rayson Global Co., Ltd dia fiaraha-miombon'antoka Sino-US, natsangana tamin'ny 2007 izay miorina ao amin'ny Shishan Town, Foshan High-Tec
Izahay dia manaraka tsara ny fizotran'ny fanaraha-maso kalitao mahazatra mba hahazoana antoka fa mahafeno na mihoatra ny andrasan'ny mpanjifanay ny vokatra. Ho fanampin'izay, manome serivisy aorian'ny varotra izahay ho an'ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao. Hatreto, Rayson dia nandany ny fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena. Ny vokatra rehetra ao anatin'izany ny vokatra vaovao dia omena endrika vaovao, kalitao azo antoka ary vidiny mifaninana. Taorian'ny taona maro nivoarana dia nanangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifantsika izahay manerantany. Azafady mba matokia fa zonay ny manondrana ny vokatray ary tsy hisy ny simba amin'ny entana aterina. Raisinay an-tsitrapo ny fanontanianao sy ny antsonao.
Ahoana no fomba ahazoako santionany？ Aorian'ny fanamafisanao ny tolotra anay ary alefanao aminay ny vidin'ny santionany dia ho vitantsika mandritra ny 15 ~ 20 andro. Azonao atao ny mangataka amin'ny orinasa tonta haka ny santionany amin'ny orinasanay na afaka mandefa anay kaontim-bola DHL, FedEx na UPS manangona, afaka mandefa ny santionany aminao amin'ny kaontinao izahay. sary famantarana amin'ny vokatra? Azonay atao ny manao ilay kidoro arakaraka ny volavolanao na manome serivisy OEM mila anao fotsiny hanome ny sangan'asan'ny vokatra na sary logo anao. 1. Apetaho amin'ny baoritra eo amin'ny efitranonao ny baoritra, esory tsara ny kidoro ary apetraho eo am-pandrianao. 2. Sasao tsara amin'ny kitapo ny kitapo ivelany mba hahazoana antoka fa tsy hokapainao ny plastika ratsy ao anatiny na ny kidoro, aza mitory antsy. 3. Esory eo ambony fandrianao ilay kidoro nasiana tombo-kase 4. Sasao tsara ny kitapo plastika miaraka amin'ny famantaranandro rehefa manomboka decompress ny kidoro, esory ny kitapo plastika. 5.Avelao 24 ora hivelatra tanteraka ny kidoro vaovao.